QISO XANUUN BADAN: Xero Qaxooti ayaa lagu dhalay wuxuuna ku gaaray 5-sano, Maantana Bayern Munich ayuu Champions League kala qeyb galayaa!!!+SAWIRRO – Gool FM
QISO XANUUN BADAN: Xero Qaxooti ayaa lagu dhalay wuxuuna ku gaaray 5-sano, Maantana Bayern Munich ayuu Champions League kala qeyb galayaa!!!+SAWIRRO
Byare September 14, 2018
(Europe) 14 Sab 2018. Alphonso Davies ayaa lacagihii ugu badnaa ebid ee lagu iibsado laacib ka ciyaara horyaalka MLS dalka Mareykanka bisha Janaayo ugu biiraya Bayern Munich 17-milyan oo bound.
Haddaba waxaan halkan kugu heynaa Qiso aan innaba caadi ahayn oo ku aadan Laacibka Cusub ee Camaaliqada Bundesliga.
Davies oo 18 jirsan doona marka uu ku biiro Bayern Munich Sanadka Cusub ayaa ku dhashay xero Qaxooti ka hor inta aysan qaadan dalka Canada oo uu iminka dhalashadooda heysto.
Waxay ahayd socdaal Cajiib ah, wuxuu 2000 ku dhashay xero Qaxooti oo ku taala dalka Ghana.
Markii uu bilowday dagaalkii labaad ee dalka Liberia, labadiisa waalid ee Victoria iyo Debeah Davies ayaa ka soo qaxay dhulkooda.
“Waa inaad Meydad ka talaabsataa si aad u soo baxdo oo cunto u hesho,” Hooyadii Victoria ayaa sidaa tiri.
“Aad ayay u adkeyd, Khatar ayay ahayd.”. Aabihii ayaa sidaa yiri.
“Way adkeyd in lagu noolaado halkaa maxaa yeelay mararka qaar wadada kaliya aad ku bad baadi karto waa inaad adna Hub/Qori qaadato.
“Innaguna ma aynaan dooneyn oo xiiso uma qabin inaan Qori ridno.”.
Waxay soo safreen kumanaan Mile oo Galbeedka Afrika ah, waxayna markii dambe heleen xerada qaxooti ee lagu magacaabo Buduburam ee ku taala beriga Ghana.
Canugoodii Curudka ee ah Alphonso Davies ayay ku dhaleen Xerada Qaxootiga labada bishii November ee sanadkii 2000, shantii sano ee ugu horreysay noloshiisa wuxuu Davies ku soo qaatay xerada Buduburam.
Yeelkeede, waxay markii dambe ku baaseen wareysigii laga qaaday waxaana loo qaaday Edmonton ee dalka Canada.
Alphonso waxaa laga diiwan galiyay Iskuul ciyaaro oo bilaash ah, waxaana soo arkaday Whitecaps, labo sano ka hor markii uu 15 jir ahaa waxaa loo gacan galiyay kulankiisii ugu horreeyay ee xirfadlenimo ee kooxda labaad ee Whitecaps FC 2. Bil kaddibna wuxuu dhaliyay goolkisii ugu horreeyay.
Dabayaaqadii xagaagan tababaraha kooxda koowaad ee Whitecaps Carl Robinson ayaa Alphonso Davies siyay fursadii ugu horreeyay uu uga soo muuqdo horyaalka heerka koowaad ee MLS dalka Mareykanka.
Wuxuuna noqday laacibkii labaad ee ugu yaraa horyaalka MLS kaddib Freddy Adu.
Kooxo badan oo ka dhisan Premier League sida Manchester United, Chelsea iyo Liverpool ayaa wada doonayay wiilkaan ku dhashay Qaxootiga balse Bayern Munich ayaa kula wareegtay qiimo ay adag tahay in la diido.
Waxay ka dhigtay laacibka lacagihii ugu badnaa ebid looga soo iibsado horyaalka MLS ee dalka Mareykanka.
Waxaa kaloo xusid mudan in Davies uu ku guuleystay abaal marinta Laacibka Sanadka ee 17 jirada Canada.
"Lama yaabi doono haddii Pogba uu dib ugu laabto Juventus" - Andrea Pirlo